Hadimooyinka Axmed Faarax Idaajaa ka Galay Somaliland | ToggaHerer
← Daawo: Beesha Sacad Yoonis Oo Deedafeeyey Hadal ay sheegeen in uu ka soo yeedhay Xubno is Been fariimay Sidoo kalena Sheegay in ay Ku Qanacsan yihiin Goamadii Garxajis Bari …
Daawo: Cismaan Cabdinuur Xaashi Waa Nin Qoraanimo, Saxafinimo iyo Abwaanimo isku darsaday Waxa uu Maasooyin ku qeexayaa Quraanka kariimka ah , iyo is leekaanshaha tirada Magacyada Anbiyada iyo Suuradaha Quraanka →
Published on June 6, 2018 by Magan
Waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland booqasho ku jooga ninka murti dhaadhiga sheegta ee Axmed Faarax Cali (Idaajaa) oo horseed u ah dadka reereeya suugaanta Soomaalida.
Axmed Faarax Cali (Idaajaa) waxa uu caan ku noqday inuu si aan dheeli-tirnayn u buun-buuniyo suugaanleyda ka soo jeeda gobollada Soomaaliya ee uu ka soo jeedo, halka uu hoos u dhigo abwaannada waaweyn ee ka soo jeeda Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku colaadiyo kifaaxii halgankii hubaysnaa ee shacbiga Somaliland la galeen taliskii dhiigyo cabka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre oo ay isku ardaa ahaayeen.
Xeel-dheereyaasha suugaantu waxay Idaajaa ku sifeeyaan inuu calanka u sido dadka liin-bixiyey suugaanta Soomaalida. Bal aan afar qoddob ka soo qaato gabood fallada uu ku sameeyey abwaannada waaweyn ee reer SomalilandL-
Axmed Faarax Cali (Idaajaa) waxa uu daabacay buug uu kaga Hadley maansadii caan-baxday ee Deelaydii oo uu isaguna ku jiray, waxaanu maansadaas ku tilmaamay “Mid dumisay dawlad weyn oo Soomaaliyeed oo kacaan ah.” waxa uu si indho la’aan ah reernimo ugu taageersanaa taliskii Af-weyne ee xasuuqay in kabadan konton kun oo qof oo rayid ah oo aan waxba galabsan.Mr. idaajaa wuxuu buugiisa ku daadifeeyey artagtidii saliimka ahayd ee Alle ha u naxariistee Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye) oo uu ku tilmaamay “Abwaan ay yaqaaneen uun saaxiibadii” waxaanu yaraystay hal-abuurnimadii iyo hibooyinkii naadirka ahaa ee ILAAHAY ku galaday Marxuum- Gaariye,Sidoo kale, waxa uu maagay Abwaan Xasan Xaaji Cabdilaahi (Xasan Ganay), waxaanu ku eedeeyey inuu Maansadii Deelayda ay gelisay “Xiqdi iyo cadho uu u hayey Abwaan Sangub oo Agaasimihiisa ahaa.”’Mr. Idaajaa, intaas kumuu joogine wuxuu cambaareeyey ALLE ha u naxariistee abwaan Khaliif oo ahaa hal-abuur ka soo jeeday Gobollada Puntland ee waddanka Soomaaliya, waxaanu ku dheel-dheelay sidii loo dilay waxaanu yidhi “Khaliif lama garanayo in ay qudhmistii dishay iyo inay Itoobiya khaarajisay.” Wuxuu ka difaacayey dawladdii Soomaaliya ee uu ka mid ahaa dadkii sida diinta u rumeeyey taliskii hororka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre hoggaaminayey.
Sidoo kale waxa la isku raacay in Mr. Idaajaa uu biyo dhiciyey Barnaamijka Dhaqanka ee laanta afsoomaaliga ee VOA-da oo uu ka dhigey gole uu ugu abtiriyo suugaanleyda reerkiisa.
Maxamed Cabdi Muxumed